Global Voices teny Malagasy » Na Eo Aza Ny Fomban-drazana Sy Ny Dinam-piarahamonina, Mitàna Ny Ejiptiana Eo Amin’ny Sehatra Fandihizana Ny Salsa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Mey 2016 3:18 GMT 1	 · Mpanoratra Rawan Gharib Nandika miora
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Amerika Latina, Ejipta, Mediam-bahoaka, Tanora, Vaovao Tsara, Vehivavy sy Miralenta, Zavakanto & Kolontsaina
Aasim Rady sy Rasha Sadek. Dihy Salsa Sosialy any Ejipta, tamin'ny Janoary 2015. Sary: YouTube
Minoa na tsia, fa manan-javatra iraisana kokoa noho ny zavakanto sy kolontsaina tranainy sy ny fananganana piramida i Amerika Latina sy i Ejipta. Rehefa avy nanandrana ny sakafo sy ny mozika avy any Amerika Atsimo, miampanampana amin'ny tazon'ny dihy salsa ankehitriny ny sehatra ara-kolontsaina ao Cairo. Ary toy ny hitoetra eto ity tazo ity.
Raha mikasa hampiantrano ny Alina Amerikana Latina Isam-bolana ny “Cairo Opera House” ho ao anatin'ny fandaharany isan-taona, taorian'ny Jazz sy ny Latin American Flair noraisina tamin-kafanam-po  tamin'ity Janoary ity, lasa zava-misy ny nofinofy handihy tango sy salsa, noho ireo sekoly matianina momba ny dihy toy ny Latin Love Dance School  sy vondrona mpakafý toy ny Latino Dance Community – Egypt  tao amin'ny Facebook.
Nitranga nandritra ny taona maro ny fihitaran'ny salsa ao Cairo. Araka ny tati-baovao iray tamin'ny 2010 izay vao tsy ela no nahazo laza tao amin'ny YouTube, ny tanora ao amin'ny renivohitra Ejiptiana no tena voasarik'ilay dihy. Dimy taona lasa izay, nanontany tena ny mpanao gazety hoe mandra-pahoviana no mety haharetan'ny “tazon'ny salsa” ao Cairo. Ankehitriny anefa, toa miha-mafy hatrany ny firohotana ao an-tanàna sy amin'ny tranonkalam-pifandraisana.
Na izany aza tsy nilaozana zava-tsarotra sasany ny fihanaky ny salsa tany Ejipta. Maneho izany i Sara Reda ao amin'ny rakipeo fohy fanadihadiana “Revolisiona Ejiptiana amin'ny Salsa: Manohitra ny Kolontsaina ary Maharitra sy Mitoetra ny Salsa ,” izay nanambaràny ny hafaliana sy ny fahatokiana amin'ny dihy salsa azon'ny tanora lahy sy vavy Egyptiana, sady mamoka ihany koa ny lafiny sasany tsy mahasarika amin'ity io.
Manamarika ny fifanoheran-kevitra sy ny mizaàna tsindrian'ila izay mety apetraky ny dihy salsa i Nour, mpandihy salsa 24 taona, raha nitafatafa tao amin'ilay fanadihadiana, indrindra ho an'ny vehivavy:
Maro ny lehilahy ao Ejipta no milaza ho misoka-tsaina sy tsy mifikitra amin'ny nentin-drazana. Tsy mihevitra toy izany aho, fa fantatrareo ihany ny lehilahy. Mitsara anao izy ireo. [Fa] Tsy ny lehilahy ihany. Ny olona rehetra no voakasik'izany. Misy vehivavy mety tena mitsara anao amin'ny dihy ary misarom-boaly […] Mihevitra aho fa amin'ny ankapoben'ny kolontsaina ny olana. Mandihy miaraka aminao ny lehilahy sasany ary manaja anao amin'izay zavatra ataonao sy manaraka ny tianao eo amin'ny fiainana, na inona na inona toerana misy anao, misarom-boaly na tsia, fa ny hafa kosa mety tsy hanaja anao.
Nasongadin'i Nour ihany koa ny famerana ara-tsosialy sasany sy ny fahavoazana mianjady amin'ny vehivavy izay te-handihy salsa sady mitondra voaly:
Mihevitra avy hatrany ny olona fa relijiozy sy voatokana ara-kolontsaina ireo ankizivavy misarom-boaly ireo. Noho izany, manantena fa hanao zavatra tena amin'ny fomba nentin-drazana izy ireo. Manasokajy azy izy ireo. Ary raha misy vehivavy misarom-boaly manao zavatra inoany ho “tsy mendrika” dia voasokajy avy hatrany ho manao tsirambina sy, fantatrareo, miala amin'ny fivavahana. Tsy fantatr'izy ireo fa tsy ny vehivavy misarom-boaly rehetra dia relijiozy. Lasa fironana amin'ny fomba nentin-drazana kokoa ny vehivavy misarom-boaly. Tsy misy hifandraisany amin'ny fivavahana intsony izany. Fara faharatsiny tsy toy ny nahazatra teo aloha. Manana olana amin'ny tsy fanekena ny fahasamihafana eo amin'ny toetran'ny olona sy ny zavatra inoany ny Egyptiana. Mirona kokoa a,min'ny fanasokajiana ny olona ry zareo. Mila manana lazambidy momba anao izy ireo.
Peta-drindrina ho an'ny andiany faharoa tamin'ny Kongresy Iraisam-pirenena momba ny Salsa tao Ejipta. Sary: Kongresy Iraisam-pirenena momba ny Salsa / Facebook
Fa tsy ny vehivavy ihany no miatrika fameperana ara-tsosialy, raha ny dihy salsa no resahana. Asehon'ny fanadihadiana nataon'i Reda fa mety ho manano-sarotra ho an'ny lehilahy maro, ihany koa, ny fomba hidirana amin'ny vondrom-piarahamonina salsa. Nilaza i Mohamed, iray amin'ireo mpandihy nitafàna, fa maro ny lehilahy, indrindra fa ireo avy amin'ny sokajin'olona tsy dia nahita fianarana, no sahirana teo amin'ny sehatra fandihizana. Nilaza izy fa mety manasaro-javatra ny dinam-piarahamonina mifandraika amin'ny dihy:
Samihafa tanteraka amin'izay misy any ivelany rehetra any ireo alin'ny Salsa any Ejipta. Natokana indrindra ho an'ny tanora izany. Ho an'ny tovolahy mazava ho azy. Ny antony dia satria amin'ny fivavahana, zava-pady ny dihy ary tsy mifanaraka sy tsy mendri-kaja ny dihy amin'ny kolontsaina Ejiptiana. Ohatra, tsy tokony handihy ny olona efa be taona, satria tsy maintsy manaja ny taonany izy ireo […] ho an'ny lehilahy [tanora kokoa], heverina ho natokana ho an'ny ankiizivavy sy ny vehivavy ny dihy, tsy mendri-kaja ny dihy. Izany no mahatonga ny dihy ho olana ho an'ny sokajin'olona rehetra.
Noporofoin'i Mahamed fa ny tsy fisian'ny fahatsapana ny fahafahana eo amin'ny lehilahy Ejiptiana no fanalahidin'izany fivoaran-javatra izany:
Ao anatin'ny olana goavana ireo lehilahy Ejiptiana mahantra. Nampahafantarina azy ireo fa vavivavy ny dihy. Noho izany dia mitombo tsy misy ifandraisany amin'ny vatany izy ireo, tsy misy mihitsy ny fahatsapana fahalalahana. Ny tena ratsy indrindra aza, tsy ny lehilahy ihany no voarara ara-tsosialy amin'ny dihy, ny vehivavy koa toy izany nefa azo antoka fa tena noho ny antony hafa, ary mba tsy hilazana fa nomena endrika ratsy eny imason'ny olona ny dihy.
Na eo aza ireo fomban-drazana sy dinam-piarahamonina ireo, mbola mandihy ihany ny Ejiptiana. Nandray anjara koa ny tanàna hafa tamin'ny famoronana vondrona sy kilasy mba hanohizana ilay fironana. Mitoetra foana ny fanamby sarotra, fa mba ho toy izany ny fahavononana sy fifaliana ateraky ny fahazarana mandihy izay toa miha tsy vahiny tsikelikely any Ejipta. Araka ny fanazavan'i Rasha tao amin'ilay fanadihadiana:
Eny, heveriko fa miparitaka haingana manerana an'i Ejipta ankehitriny ny salsa. Nanomboka tao Cairo izany, nifindra tany [Alexandria] sy Hurghada ary any an-kafa rehetra any. […] Na mbola miatrika fanamby sarotra sy famerana ary hevi-diso sasany noho ny tsindry sy lafin-javatra ara-kolontsaina aza, uhh fa raha tsy izany dia miparitaka hatrany izy io.
Raha tsy afaka manatrika mivantana ny fampisehoana dihy salsa any Egypta ianareo, ny lahatsary zaraina amin'ny YouTube, nalaina nandritra ny alin'ny salsa sy ny fampianarana dihy no zavatra tsara indrindra manaraka. Azo jerena ao amin'ny fantsona Egyptiansasero  ny rakitsary sasany mahafinaritra:
Jereo koa ny fantsona Aasim Rady, izay misy rakitsary tsara tarehy tamin'ny alin'ny salsa tao amin'ny Bian Cafe ao Cairo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/05/04/80525/
 Jazz sy ny Latin American Flair noraisina tamin-kafanam-po: http://english.ahram.org.eg/NewsContent/5/33/180874/Arts--Culture/Music/Art-Alert-Jazz-and-Latin-American-Flair-at-the-Cai.aspx
 Revolisiona Ejiptiana amin'ny Salsa: Manohitra ny Kolontsaina ary Maharitra sy Mitoetra ny Salsa: https://soundcloud.com/sara-reda/the-egyptian-salsa-revolution
 fantsona Egyptiansasero: https://www.youtube.com/watch?v=flZfZ7I-WWs